Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha isku xira indhaha. Shiinaha indhaha Warshad isku xira
Heerka 0.9mm 2.0mm 3.0mm ST APC UPC Fiber Optic Isku xira
Isku xira Fibre optic wuxuu leeyahay xarig isku dhejinaya adabtarada si loo helo isku xir aamin ah. Xidhiidhiyuhu wuxuu ka kooban yahay naxaas la marsaday oo naxaas ah iyo bir dhoobada dhoobada / guga / gogosha foosto oo lagu daray gacmo dhejis ah iyo boot caag ah. Isku xira Fibre optic, ama isku xiraha fiber optic, waa qeyb ka mid ah joojinta dhamaadka xarkaha fiber optic-ga, waxayna u suurta gelisaa isku xirnaanta iyo goynta ka dhaqsaha badan fiiqidda fiilada. Waxay si farsameysan isugu lammaaneysaa iskuna waafajisaa xudunta ubucda si ay u sameysato nal ...
SC APC UPC isku xiraha Fast
Dib-u-celinta wanaagsan iyo is-beddelka Waxqabadka heerkulka wanaagsan iyo adkeysiga. 3. Heerarka tayada-sare leh ee dhoobada dhoobada luminta gelinta hooseysa. 4. Qeexitaanka cabbirka sare ee milicsiga. Codsi 1. Qalabka dhejiska. Wareegyada qaybinta. 3.Haalinta ama soo celinta degdega ah ee shabakadaha fiber-ka. 4. FTTH Outlets isku xiraha degdega ah. 5. Xiriirinta miiska deegaanka LAN. Qalabka Hawlgalka 1. Daboolida Xarigga siligga daboolan 2.Wire Stripper 3.Length Fixed Instrument 4.Optical Fiber Going Installat ...
Standard 0.9mm 2.0mm 3.0mm SC APC UPC Fiber Optic Isku xira
Heerka 0.9mm 2.0mm 3.0mm LC APC UPC Fiber Optic Isku xira
Heerka 0.9mm 2.0mm 3.0mm FC APC UPC Fiber Optic Isku xira